Zvido zvekubva kune inoenzanisira nyika nenzvimbo dzakatenderedza - Modelarski Świat
Kutaurirana naPatryk - anokunda weXNUMXst SEM Championship.
Sezvo vazhinji venyu munogona kunge muchiziva, makwikwi atakaitisa paboka reModeling uye Weathering Fans achangopera, kureva XNUMXst Modeling World Cup. Ndakafunga kukumbira mukundi wechiitiko ichi, Patryk Manikowski, kuti ndibvunzurwe pfupi.
Ndiine kamera kuLand Forces Museum muBydgoszcz!
Ino nguva, chimwe chinhu chevanoda nhoroondo uye zvombo chaizvo. Nhasi ndashanyira nzvimbo yakanaka uye yepedyo iwe, kwaunogona kuwana akawanda anonakidza mashoo kubva kune ese WW I na II, pamwe neyekutanga uye yapashure pehondo nguva. Kana mumwe munhu achinyanya kufarira yunifomu nemidziyo yemasoja ari kurwa kumberi, ichi chinhu chinofanirwa! Iyo miziyamu iri ...
© 2021 Modeling Nyika. Yakavakwa uchishandisa WordPress uye iyo Musoro weMesmerize